मदिरा पिएपछि मानिस लाइ कसरी र किन हुन्छ ह्याङओभर ? «
मदिरा पिएपछि मानिस लाइ कसरी र किन हुन्छ ह्याङओभर ?
अहिले वा उहिले विभिन्न तरिका बताइने गरिएको छ । जस्तै: चराको मासु खान, काचो अन्डा खाने, टमाटरको जुसलगायत बताइने गरिएको छ। सवैभन्दा ठूलो कुरा ह्याङओभर किन हुन्छ भन्ने विषय नै हो । किन हुन्छ ह्याङओभर ? विज्ञान भन्छ कि धेरै मदिरा पिउँदा ह्याङओभर हुन्छ। जब टाउको भारी हुने, चक्कर आउने र थकानको महशुस हुन्छ तब शरीरबाट मदिरा निस्किसक्छ ।
कसरी र किन हुन्छ ह्याङओभर ?